Intetho - Wikipedia
Intetho yenzeka phakathi kwabantu ababini nangaphezulu xa bedibene beyenza ngomlomo intetho yabo nomnye komnye. Ngamanye amazwi intetho isetyenziswa xa kuthethwa okanye kuncokolwa. Ngabantu kuphela abanolwimi lokuthetha. Intetho ephakathi kwabantu ababini nangaphezulu ibizwa ngokuba yincoko.
Intetho yenziwa zizandi ezihamba ngomoya. Izandi eziphuma engquleni zibunjwa yimilebe, lulwimi, ngamazinyo, yimpumlo, nayinkalakahla.
Ukuze enze intetho umntu kufuneka a:
khethe izandi zentetho
zibeke ngokulandelelana kwazo
khuphe isandi kwingqula yakhe
sebenzise imilebe, ulwimi, amazinyo, impumlo, kunye nenkalakahla ukuze abumbe izandi.
Zingakho iingxaki nanini na kwezi zigaba zine. Iingxaki zesigaba soku-1 nesesi-2 zaziwa ngokuba ziingxaki zamazwi, ngeli xa ezesigaba sesi-3 nesesi-4 zisaziwa ngokuba zezokubiza amagama okanye zentshukumo eyenzekayo. Abanyanga abantu abanobunzima xa bethetha naxa besebenzisa ulwimi cbanganceda ukunyanga ezo zigaba kufunyanwa kuzo ubunzima. 
Izilwanyana azinayo intetho, kodwa ezinye ziyakwazi ukuncokola nezinye ngokusebenzisa izandi.
Isithehti singatsho into, ize ithi yakuviwa loo nto ithethwa seso sithethi isenokuqondwa ngabamameleyo. Kuba nzima ukuluqonda ulwimi olutheththwayo ngamanye amaxesha. Isenokwenza okokuba intetho imfiliba, iyabhidisa, okanye iyalahlekisa. Isenokuba lula okanye kubenzima ukuba iqondakale.
Kwale ntetho inye isenokubekwa ngezinye iilwimi, ngokuthi ulwimi luguqulelwe kwezinye iilwimi.
↑ Bauman-Waengler J. 2000.
↑ Stackhouse J. and Wells B. 1997.
Last edited on 4 EyeSilimela 2017, at 12:32
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-4 EyeSilimela 2017, kwi-12:32